ऐतिहासिक शहर दोलखामा आज ठुलो लाखे (ड्वाकु राकस) जात्रा सम्पन्न, यसपालीको लाखे जात्रा समापन, साथमा फोटो फिचर र भिडियो सहीत - bampijhyala.com
Home > दाेलखा समाचार > ऐतिहासिक शहर दोलखामा आज ठुलो लाखे (ड्वाकु राकस) जात्रा सम्पन्न, यसपालीको लाखे जात्रा समापन, साथमा फोटो फिचर र भिडियो सहीत
ऐतिहासिक शहर दोलखामा आज ठुलो लाखे (ड्वाकु राकस) जात्रा सम्पन्न, यसपालीको लाखे जात्रा समापन, साथमा फोटो फिचर र भिडियो सहीत
७ भाद्र २०७८, सोमबार ००:५८ bampijhyala
बाँपीझ्याला, दोलखा । दोलखा अभयपुर शहरको यसवर्षको लाखेजात्रा ठूलो लाखेको प्रदर्शन र पौडी खेल संगै उल्लास पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । विगत वर्षको तुलनामा दर्शकको संख्यामा कोभिड महामारीको असरले प्रभावित बनेको भीमेश्वर नगरपालीका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष विराजमान श्रेष्ठको भनाई रहेको छ ।
गत बर्ष माथिल्लो थाब्न टोलवासीको लाखे हुनेको पाला रहेको थियो । यसै गरी यस वर्ष तल्लो टोलको तर्फबाट स्थानिय चामसली निवासी युवा विक्रम मल्लको ठुलो लाखेको भूमीकामा भाग लिएको थियो ।
यसपालीको ठुलो लाखे – ड्वाकु राकस
विगतको वर्षको तुलनामा लाखे निकाल्नमा यसपाली अलि ढिलो भएको स्थानिय वासिन्दाहरुको भनाई रहको छ । तर पनी जात्रामा रौनकता भने यथावत रहेको बताएको छ भने पौडी खेलाइने रानी पोखरी लगायतको परिसरमा रंगीचंगी तोरणरुपी कागजको मालाले झकिझकाउ देखिएकोले पनि जात्रा उल्लासपूर्ण समाप्त भएको छ ।
यसपालिको (ख्याली) दाउरेको भूमिका निभाउने एक युवकले समय सापेक्ष मास्कको प्रचारले जनचेतना जगाउँदै मास्कको भेषभुषामा मास्क लगाउन जरुरी छ । यसै गरीे दोलखाको आजको जात्राले सामाजिक सन्देश फैलाएको दृश्यले जात्रामा थप रौनकता दिलाएको छ भनी महिला विकास सचेतन केन्द्रका महासचिव विन्दीया श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
यसरी उक्त जात्राको प्रत्यक्ष प्रसारण स्थानिय कालिञ्चोक युवा क्लवका महा–सचिव एवं यस पत्रिकाका सह–सम्पादक अनिलचन्द्र श्रेष्ठले सहयोग गर्नु भएको थियो ।
स्थानिय बाजा संरक्षण र परम्परालाई निरन्तरता दिन वडाध्यक्ष विराजमान श्रेष्ठको विशेष पहल र स्थानिय युवाहरुको सहभागी र सहयोग रहेकोे छ ।
काठमाण्डौं उपत्यकाबाट ऐतिहासिक साँस्कृतिक शहर मोटरको बाटोको हिसावले १३० किलो मिटर टाढा रहे पनी यसपाली कोभिड १९ को संक्रमणबाट स्थानिय जनताहरुलाई बचाउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चरिकोट दोलखाले नगरपालीकाका केही वार्डहरुमा निषेधाज्ञा गरिएको कारणले पनी विधी चलाउनु पर्ने गुठीयारहरु र दोलखा भित्रका नागरिकहरु भन्दा अन्य शुभचिन्तकहरुको सहभागीता कम रहेको थियो भनी भी.न.पा. वार्ड नं –२ का वडाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
भिडियो समाचारको लागि विन्दीया श्रेष्ठ दोलखाले सहयोग गर्नु भएको छ ।
साहित्यकार मालिका केशरीको आख्यान ‘दुङाल’ विमोचित
हजुरको आजको दिन, २०७८ भाद्र ७ गते, साेमवार, २३ अगष्ट २०२१
ऐतिहासिक पर्व इन्द्रजात्रा अवधिभर काठमाडौँका भित्री क्षेत्रमा सवारी निषेध ७ भाद्र २०७८, सोमबार ००:५८
निक्षेपको ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा ७ भाद्र २०७८, सोमबार ००:५८
सम्पादकियः विशेष आज असोज १, बाँपिझ्याला अनलाईन पत्रिका संचालनको एक बर्ष ७ भाद्र २०७८, सोमबार ००:५८
पानी गौँथलीको ठूलो बथान भेटियो ७ भाद्र २०७८, सोमबार ००:५८
सम्पादकियः विशेष थनु असोज ला तिथी १, बाँपिझ्याला अनलाईन पति हिल्केय दाक्षि दँ ७ भाद्र २०७८, सोमबार ००:५८